Processor AMD Athlon 64 X2 akasebenzi, ngokomzimba nangokwengqondo. zinsizakuphila
Lokhu kwethulwa emuva ngo-2006. Kwakuwusuku lokuqala multi-core izixazululo
inkampani AMD. Hlaziya ukubaluleka kwabo namuhla akunzima. ukukhululwa kwabo kwaba isinyathelo sokuqala yokuziphendukela kwemvelo nomkhiqizi emkhakheni obuchwepheshe. Nguye kwaba nethonya eliphawulekayo ukuthuthukiswa imboni ikhompyutha. Manje akekho ngeke umangale 8 kwe-CPU zenuzi. Kuye kuyinsakavukela. Kodwa uma leso sinqumo bukhicite uhlobo revolution, izithelo zazo sisalokhu zisebenzisa.
Eyokuqala 2-core CPU ku lekhethelo PC ekhaya isibe umkhiqizo enkaba okuphakade AMD - inkampani "Intel". Kwaba processor "Pentium" nge Inkomba 840. I xe ukufakwa ke ku isokhethi 775, okwakukhona ngaleso sikhathi enkulu yokukhiqiza inikezwe. Ukwandisa inani nuclei siphoqe ukunciphisa imvamisa iwashi. Lokhu kuye kwaholela kahle izicelo owodwa threaded. Kwatholakala imiphumela efanayo, futhi umkhiqizo lowo oyimbangi yakhe unomphela - AMD Athlon 64 X2. Kodwa ngenxa yokuthi izixazululo kwaqale okubhekwe multithreading, ngakho umphumela waba njengoba donsile njengoba lowo of esincintisana zako ezisemqoka. With ukuvela isofthiwe uyakwazi ukusebenzisa ngokugcwele cores ezimbili ngokomzimba, ukulingana kwamandla kancane kancane washintsha. Futhi lezi zinqumo, kancane kancane esikhundleni CPU nge 1 wabo izinto eziyinhloko. Yebo, lapho namanje ithengiswe mishini, kodwa kuvame kakhulu ukuba kusetshenziswe i-PC ibhizinisi, okuyinto eza umsebenzi kuqala zokusebenza ehhovisi futhi eziphansi kohlelo esiphelele. Ukuze tekugembula kunconywa ukuthatha 4, 6 noma 8 nuclei. In an icala ngokwedlulele kungenzeka ukumisa ukhetho ku-2 cores, kodwa ngeke kakhulu kuthinte izinga lo mdlalo kungekukho okuhle. Lokhu ukuqondanisa sabekwa eminyakeni engaphezu kwengu-5 edlule, futhi omunye abasunguli bayo - AMD Athlon 64 X2.
Ekuqaleni, lezi base efakwe CPU isokhethi 939, owawungumnyaka eziphambili kakhulu kule umkhiqizi ngaleso sikhathi. Kwakuthinta ngokushesha ethulwa 4 imodeli processor. Omncane sazo sasingamashumi ncamashi AMD Athlon 64 X2 4200. Bonke abanye igama efanayo, kodwa Inkomba ezahlukene. Kwakukhona ukushintshwa 4400, 4600 futhi Flagship lo mugqa kwadingeka inombolo 4800. Futhi, sibaluli esiyisibopho lezi namagama, CPU kwaba "+", okuyinto yengezwe ukuphela kwegama. Imvamisa imodeli eyisisekelo 2200 MHz. Futhi phakathi izici ezakhiwo uzinake isilondolozi, usayizi elalisendlini 1MB entry level. Ngakho ku umongo ngamunye zaba kuphela ingxenye yako. Enye ukulungiswa kungaba ozibongayo imvamisa ephakeme kanye nosayizi okwandisiwe isilondolozi.
izinqumo yamuva angeziwe
Kamuva ngabo bavele emakethe futhi iyashelela imikhiqizo. Ukuthuthuka okuqondile kule isiqondiso bekulokhu kwavela ezinjalo CPU platform AM2. usayizi isilondolozi babenelungelo efanayo esasisandulele. Kodwa izinga sakhula kakhulu zaba, isibonelo, CPU AMD Athlon 64 X2 onobuhle 5000 - 2700 MHz. Futhi, omunye isici esisha ukusekela inkumbulo elisha, elabizwa ngokuthi DDR2. Kodwa, isimiso, lezi izilimi, lena yinkathi ephakathi okuvela okuyinto kancane eminyakeni engaphansi kwengu-2, kuningi abafana ngakho.
X2 AMD Athlon processor 64 ingenye lamaphayona AD computations parallel ku-chip olulodwa. Uma yibhekisise kuye, ungakwazi ukuthola kalula okuningi enibaziyo entsha AMD izixazululo. Futhi akukho lutho isimanga, ngoba yakhiwe phezu izakhiwo efanayo, okuyinto usebhekene izinguquko ezithile, kodwa futhi zaqhubeka izici jikelele eminyakeni engu 5 eyedlule.
Ikhadi levidiyo, kanjani ukukhetha?
Iningi wamathambo esikoleni satchels: izici ukubuyekezwa kanye kumpendulo yekhasimende
Izinhlobo umthetho: izici eziyinhloko